जवान छोराको ह’त्या पछि किरिया बसेकी आमाको बिलौना, त्यो कलिलो बुहारी र ८ महिने नातीको अनुहार मैले कसरी हेरुँ – Online Nepal Site
प्रेमीको बयान : सेते चौताराको छेउमा पुर्‍याई वि’ष सेवन गराएर पहाडबाट ध’कालिदिए ……
दुर्गेश थापाले बनाए काठमाडौमा करोडौंको घर, हेर्नुस( तस्बिर)
यौ,न सम्पर्क गर्दागर्दै झ्यालबाट खसिन् युवती, पार्किंग गरेर राखेको गाडीको छत नै भाँचियो (भिडियो)
श्रीमान श्रीमतीले यस्तो गल्ती भुलेर पनि नगर्नु ,जन्मन सक्छ तेस्रो लिङ्गी बच्चा
आफ्नी श्रीमतीका लागि पनि बनाएका छन् किम जोङ उनले यस्ता कडा नियम, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ !
ललितपुरमा भेटियो कपनको ढलमा परेका १० वर्षीय उज्ज्वलको शव
सुत्केरीको मृत्युपछि धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा तनाव
डुंगा दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु, १ जनाको शव निकालियो बाँकी खोजी हुँदै
तपाई थाहा छ रोलेक्स घडी कस्तो बिशेषताले संसारमै चर्चित बन्यो ?
घर बनाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्, सँधै लक्ष्मीको बास हुनेछ
मुख्य पृष्ठ /Video/जवान छोराको ह’त्या पछि किरिया बसेकी आमाको बिलौना, त्यो कलिलो बुहारी र ८ महिने नातीको अनुहार मैले कसरी हेरुँ
जवान छोराको ह’त्या पछि किरिया बसेकी आमाको बिलौना, त्यो कलिलो बुहारी र ८ महिने नातीको अनुहार मैले कसरी हेरुँ
1,025 1 minute read
काठमाडौं । छोरा भर्खर ८ महिनाका मात्र छन् । त्यो छोराले भनेको बाबा शब्द पनि सुन्न नपाई एक युवकको ज्यान गयो । साथीले नै बोलाएर ह त्या गरे । यो दागंको घटना हो । केही दिन यता रुकुमको घटनाले मुलक तातीरहेको छ । यो समयमा मुलुकका अन्य स्थानमा यस्तो घटना भइरहेका छन् । मजदिप भोजलाई साथीहरुले ढुंगाले हा नेर ज्यान लिए । उनी मृत अवस्थामा खोलाको किनारमा फेला परेको थियो । जोसंग संगत गर्थे उनीहरुले नै मनदिपको ज्यान लिए । ८ महिनाको छोराको तोते बोली पनि सुरु भएको थिएन । अर्का एक छोरा ८ वर्षका छन् । घरमा श्रीमती, आमा र एक दाजु छन् ।
आमा बेलुवा बस्छिन्, त्यो भन्दा अलिकती टाढा छोराहरु बस्छन् । आमालाई विहानै शनिवार फोन आयो, तपाई छिटो आउनु भनेर बोलाए । सानो छोरा लिएर घटनास्थल गएकी आमाले त्यो छोराको अनुहार हेर्नै सकिनन् । मेरो छोरा एक दिन अगाडी ममी भन्दै घरमा पसेको थियो, भोली पल्टै यस्तो अवस्था देखेपछि छोराको अनुहार नै हेर्न सकिन् । अकस्मान भएको त्यस्तो घटनाले आमा विछिप्त छन् । केही वर्ष अघि श्रीमान गुमाएकी आमाले जेठो छोरालाई यसरी गुमाउनुपर्दा आफ्नो मन भुलाउने बाटो पनि छैन । निकै सज्जन छोराको कोही सत्रु पनि छन् जस्तो लाग्थेन । तर कसले यस्तो किन गरेको हो बुझ्न नसकेको आमाको भनाइृ छ ।
जुन छोराले आफ्नो किरिया गर्ला भन्ने थियो, उनै जवान छोराको किरिया गर्नुपर्दा आमाको अवस्था निकै नाजकु छ । किरिया बसेकी आमा भन्छिन्, केही दोश मेरो छोराको थियो भने बरु कानुन, प्रशासन थियो त्यसको जिम्मा लगाइदिएको भए हुन्थ्यो । अर्काको घरमा बस्छु त्यही छोराको सहारा थियो, अहिले त्यही छोरा चुडेर लैदियो, म कसको मुख हेरेर बसुँ । त्यो कलिलो उमेरको बुहारीको अनुहार मैले कसरी हेर्नु, ८ महिनाको तोते बोली पनि नआएको नातीको अनुहार कसरी हेर्नु ?
उनले छोराले गल्ती गरेको भए आफुलाई भनेको भएपनि सजाय आफै दिन्थे उनले बिलौना गर्दै भनिन् । छोरालाई घरमा आएर बोलाएर र क्सि खुवाएर ह त्या गरेको आमाको भनाई छ । त्यस्तो रिसीइबि लिनुभन्दा आफुलाई भनेको भए हुने, प्रशासनको जिम्मा लगाइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसरी ह त्या गर्नेलाई प्रश्न गर्न मन लागेको पनि उनले बताएकी छन् । त्यस्तो के गल्ती र रिसिइवी थियो किन त्यसरी तड् पा एर मा र्यौ भनेर प्रश्न गर्न मन छ ।
‘र’णभु’मी बन्यो ललितपुर, नि’र्घात प्रहरी कु’टि’एपछि झन् ड’रला’ग्दो झ’डप, भा’गदौँ’ड म’च्चीयो(भिडियो)
यसरी भयो अर्जुनको कहानीमा तयार भएको गीतको रेकर्ड, रुवायो सबैको मन (भिडियो सहित्)
शरीर जोडिएका संसारकै सबैभन्दा बढी उमेरका जुम्ल्याहाको निधन (भिडियोसहित)
इन्द्रेणीको छत्र शाहीको धुमधामसंग भयो बिहे,अर्को साल छोरा पाउछु भन्दा बेहुली लाजले भुतुक्कै (हेर्नुस् भिडियो)
कन्चन र अनिशाको बिहेको फोटो खिच्ने दाई संग भेटियो यस्तो प्रमाण (भिडियो)
57 mins अघि